Waa maxay heerarka nidaamka waxbarasho ee USA? | USAHello | USAHello
In USA, dugsiyada dadweynaha bilaabo da'da u dhaxaysa 4 iyo 6 iyo sii ilaa 16 in 18 sano jir ah. Waxa kale oo aad u diri kartaa carruurtaada in ay ka hor-dugsiga da'da hore. Baro oo ku saabsan heerarka kala duwan ee nidaamka waxbarasho ee Maraykanka. Baro waxa meelaynta ay tahay iyo sida dugsiyada meel ilmahaaga.
Sida ku cad sharciga Mareykanka, carruurta waa in ay dugsiga u tagto tiro cayiman oo sano da 'gaar ah oo u dhexeeya. The da 'iyo tirada sano kala duwan gobol ka gobol. Waad awoodaa ogaato da'doodu u ah iyo tiro ka mid ah sano ee gobolkaaga.
in habka waxbarashada ee dugsiyada dawladda Maraykanka
waxbarashada ilmanimada hore
waxbarashada Early waa erey loo isticmaalo in ay ka hadlaan carruurta yaryar loo bandhigi waxbarashada. Xataa marka ilmahaagu yahay ilmo, waxaa muhiim ah si ay u caawiyaan akhriyey iyaga, gabyi iyaga iyo caawiyaan inay bartaan labadaba afka hooyo iyo English. Waxaa jira cilmi in shows carruurta ku hadla laba luqadood ama ka badan (waa “Billingual”) waxay leeyihiin faa'iido badan carruurta ku hadla hal luqad oo kaliya. xarumaha waxbarashada caruurnimada hore iyo xarumaha xanaanada ayaa diyaar u ah carruurta yaryar iyada oo carruurta da'da afar ama shan.
Preschool ka caawisaa caruurta (da'doodu tahay saddex iyo afar) horumarinta. Dugsiyada qaarkood waxay carruurta ee preschool ku bilaaban doona 2 iyo badh. Preschool ka caawisaa iyaga oo diyaar u ah dugsiga ee shan jir ama lix. Mid ka mid ah doorasho barbaarinta waxaa loo yaqaan Head Start. carruurta iyo barbaarinta carruurta da'doodu u-soo jeeda qoysaska dakhligoodu hooseeyo dhigan karaan barnaamijyada Head Start. Head Start waa preschool-jaban ay maamusho dowladda. Waxaad ka raadin kartaa a barnaamijka Head Start kuu dhow.
Carruurtu waxay badanaa bilaabaan dugsiga hoose la kindergarten (K) at tahay shan sano jir oo ay sii wadaan ilaa fasalka shan ama lix. Waxay ka tago dugsiga hoose ku wareegsan da'da toban ama kow iyo toban. Carruurtu waxay bartaan maaddooyin badan oo ka mid ah macalinka hal fasal.
Dugsiga dhexe (sidoo kale loo yaqaan dugsiga sare)
dugsiga dhexe ee bara ardayda fasalada lix iyada oo siddeed. Waxay ku dhowaad da'doodu toban in ay yihiin 14. ardayda dugsiga dhexe ee caadiga ah beddelato ka fasalka fasalka. Waxaa laga yaabaa in macalimiinta badan oo kala duwan hal maalin dugsi. Bulshooyinka yaryar, carruurta aan udhaqaaqi doona dugsiyada si ay u tagaan dugsiga dhexe. Waxay hayn doonaa dugsiga hoose socday.
Ardayda dhigtaan dugsiga sare u dhexeeya da'aha 14 oo sida caadiga ah 17 ama 18. Fasallada waxaa lagu habeeyay by maaddooyinka. waxaa laga yaabaa in ardayga A leeyihiin macallimiin badan oo hal maalin. Ardayda qaar waxay qaadan kartaa fasallada sare. Ardayda qaar waxay qaadan kartaa fasallo loogu diyaariyo shaqada ama kulliyadda. Dugsiyada sare waxay leeyihiin kooxaha, hawlaha, ciyaaraha, nidaamyada shaqada-barashada, iyo hawlaha kale ee.
meelaynta dugsiga ee nidaamka waxbarasho ee Maraykanka
School hab meelaynta go'aan kaas oo fasalka ardayga lagu qori doonaa. Waxa kale oo macnaheedu noqon karaa meesha dugsiga meelo arday ay fasalka gudahood.
Arday badan oo qaxooti laga yaabaa in uu seegay dugsiga inta ay xerada ku jiray ama ka cararaya dalkooda. Waxaa laga yaabaa heer fasalka ka duwan yahay arday caadiga American ah oo isku da '. Ardayda qaar waxaa laga yaabaa at heerka fasal sare ah, laakiin aadan ku hadlin Ingiriis weli. ardayda Kuwa yaabaa in ay dhibaato fasalada adag ilaa iyo inta ay Ingiriisi fiican u bartaan. Dugsiyada ee Maraykanka mararka qaar meel ardayda fasalada khalad.
Sidee dugsiyada dhigi doonaa ilmahaygu?
Ardaydu waxay qaadan karaan imtixaanada qaar ka mid ah ka hor bilowga sannad dugsiyeedka ama bilowga aad sanad dugsiyeedka. Imtixaanada waxa la qoro laga yaabaa in. Waxay laga yaabo in ay qof weyn akhri su'aalaha si ardayga. Waa kala duwan ee degmada dugsi kasta.
Haddii aad u malaynayso in ilmahaaga lagu meeleeyo fasalka qaldan, waxaad la hadli kartaa macalinka, maamulaha, ama shaqaalaha dugsiga baaro iyo kaalinta aad ilmaha.
Weydii, "Muxuu ahaa sababaynta?"Dugsiga ayaa kaa caawin kara inaad fahamto go'aankooda.
Sharax sababta aad u malaynayso in meelaynta waa khalad. Waxaa laga yaabaa in ay baddasho meelaynta haddii ay raacsan tahay sababaha aad.
Sidee dugsiga go'aan fasalka heerka ilmahayga qaadataa?
Waxaa jira sababo badan oo dugsiga ka Doortaa heer ardayga. Kuwani waa sababaha caadiga ah:
Sida ugu wanaagsan ee ardayga fahamsan Ingiriisi ama dhibcaha imtixaanka ay
talooyinka waalidka / mas'uulka
Doonitaanka buuxiyaan shaqooyinka adag
Macallimow ama la-taliyaha talo
Noocyo ka mid ah shaqada ardayga
fasalka isla, heerka kala duwan
Dugsiyada dhexe iyo sare waxay leeyihiin fasalo in la baraa heerar kala duwan ee fasalka la mid ah. Qaar ka mid ah waa adag iyo qaar ka mid ah ay yihiin sahlan. Magacyada koorsooyinka mararka qaarkood lagu qeexo heerka dhib. erayada la beddelo ku xiran tahay dugsiga degmada.
Magacyada fasallada si sahlan ama isticmaal heer fudud Ingiriisi:
Magacyada fasalada heer caadiga ah ee fasalka:
Magacyada fasalada heer sare ama sare:
GTE (Hibada iyo waxbarasho tayo leh)
meelaynta Advanced (of)